11 cuốn tiểu thuyết trinh thám phương Tây hay hấp dẫn từ đầu đến cuối | Anybook.vn - Anybook
11 cuốn tiểu thuyết trinh thám phương Tây hay hấp dẫn từ đầu đến cuối | Anybook.vn
11 tantara an-tsarimihetsika tandrefana tsara tarehy, be pitsiny miaraka amin’ny antsipiriany sy fikarohana. Manomboka amin’ny pejy fanokafana ka hatramin’ny farany dia tsy azo vinaniana ary mahagaga ny mpamaky.
1 Famonoana tao amin’ny Orient Express
2 Sherlock Holmes Complete Series
3 Ny code Da Vinci
4 Ny fahanginan’ny Zanak’ondry
5 Negro kely folo
6 Vorona mena vozona
7 Zazavavy manana tatoazy dragona
8 Sipa very – Sipa tsy hita
9 Ra mangatsiaka
11 Snowman – Jo Nesbo
Famonoana tao amin’ny Orient Express
“Ny mpamono olona dia miaraka aminay – amin’ity lamasinina ity…”
Vao lasa ny misasakalina, voatery nijanona ilay Eastern Express malaza noho ny rotsak’orana be. Ny maraina, ilay mpanapitrisa Simon Ratchett dia hita faty tao amin’ny efitranony manokana niaraka tamin’ny antsy roa ambin’ny folo, ny varavaran’ny efitrano dia mihidy avy ao anatiny. Ny iray tamin’ireo mpandeha tao anatin’ilay lamasinina no olon-dratsy.
Irery eo afovoan’ny tafio-drivotra miaraka amin’ny mombamomba ilay mpamono olona amin’ny alàlan’ny fijoroana vavolombelona ataon’ny tsirairay, ny mpitsikilo Hercule Poirot dia tsy maintsy mahita ny fahamarinan’ilay mpamono teo amin’ireo fahavalo roa ambin’ny folo niharam-boina, alohan’ny ahafahan’ilay mpamono olona mihady.
Sherlock Holmes dia toetra mpitsongo noforonina tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-19 sy fiandohan’ny taonjato faha-20, niseho voalohany tao amin’ny asan’ny mpanoratra Arthur Conan Doyle navoaka tamin’ny 1887. Izy dia mpitsongo tsy miankina malaza any Londres. eo am-pandaminana ireo raharaha tsy maintsy ilaozan’ny polisy. Maro no mihevitra an’i Sherlock Holmes ho olo-malaza fanta-daza fanta-daza indrindra amin’ny tantaran’ny literatiora ary iray amin’ireo literatiora malaza indrindra eran-tany.
Sherlock Holmes dia niseho tamin’ny tantara efatra sy tantara fohy 56 nosoratan’i Conan Doyle. Saika ny asa rehetra dia nosoratana tamin’ny endrika naoty nataon’i Dr. John H. Watson, namana akaiky sy mpanoratra tantaram-piainan’i Sherlock Holmes, izay tsy misy afa-tsy asa 2 nosoratana tamin’ny endrika naoty olona fahatelo. ray. Ny roa voalohany amin’izy ireo dia tantara fohy ary niseho voalohany tao amin’ny Beeton’s Christmas Annual tamin’ny 1887 sy ny Lippincott’s Monthly Magazine tamin’ny 1890. Nalaza be i Holmes rehefa andiana tantara fohy. Navoaka tao amin’ny The Strand Magazine ny asan’i Conan Doyle tamin’ny 1891. ny taona 1878 ka hatramin’ny 1903 ary ny raharaha farany tamin’ny 1914.
Ny Combo Sherlock Holmes Complete dia misy fizarana 3:
Sherlock Holmes Complete Episode – Episode 1
Sherlock Holmes Complete Episode – Episode 2
Sherlock Holmes Complete – Boky faha-3.
Ny code Da Vinci
Raha niasa tany Paris i Robert Langdon, manam-pahaizana momba ny mari-pamantarana Harvard, dia nahazo antso an-telefaona maika tamin’ny hariva. Nisy namono tao amin’ny tranombakoka ilay zokiolona mpitahiry ny Louvre, kaody mistery hita teo akaikin’ny fatin’ilay niharam-boina. Rehefa namaha ireo mistery hafahafa ireo i Langdon sy i Sphie Neveu, mpahay kriptografika frantsay manan-talenta, dia talanjona izy ireo nahita famantarana maromaro nafenina tao amin’ny asa soratr’i Da Vinci sy ny lohatenin’i Da Vinci.
READ 50 Quotes & Câu Tỏ Tình Cảm Động Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình Trung Quốc | Anybook.vn
Nitombo ny hamehana rehefa namoaka fifandraisana nanaitra i Langdon: Niditra tao amin’ny Convent Jewish ilay mpitandrina nodimandry — tena fikambanana miafina izay tsy misy mpikambana ao aminy Sir Isaac Newton, Bottcelli, Victor Hugo, ary Da Vinci. Nanana fihevitra i Langdon fa mikatsaka tsiambaratelo ara-tantara manaitra izay efa voaporofo nandritra ny taonjato maro sady mazava sy mampidi-doza. Amin’ny hazakazaka mikoropaka namakivaky an’i Paris sy any ivelany, i Langdon sy Neveu dia mahita ny tenany hanohitra mpivarotra antitra mahery izay miseho hanakana ny hetsika rehetra ataony. Raha tsy afaka mamaha ny olana izy ireo dia ho very mandrakizay ny tsiambaratelon’ny Abbey – ary zava-misy ara-tantara manafintohina.
Manapaka ny lasitra amin’ny tantara an-tsary mpitsongo nentim-paharazana, ny Da Vinci Code dia fandrosoan’ny saina manaitra ary saro-takarina miaraka amin’ny antsipiriany sy zava-baovao mahavariana. Avy amin’ny pejy fanokafana ka hatramin’ny fiafarana tsy ampoizina sy mahagaga, mpanoratra be mpividy indrindra Dan Brown, dia nanaporofo ny tenany ho mpahay tantara.
Ny fahanginan’ny Zanak’ondry
Resadresaka nifanaovana tamina mpihinan-kanina iray izay nanao vazivazy ara-tsaina, fanambarana antsasak’adiny fa natao ho an’ireo marani-tsaina ihany izy, ny fahitana ny maha-izy azy sy ny eritreriny izay tadiaviny indraindray. , tao anatin’ny tebiteby tamin’ny fanisana ny fahafatesana, dia niady mafy izy mba hampitsahatra ny fitarainana naharitra ela.Tazony ny nofiny: ny fitarainan’ny andian’ondry efa hovonoina.
Ny fahanginan’ny Zanak’ondry dia manana ny singa rehetra mandrafitra ny tantara mampihoron-koditra tsara indrindra amin’ny mpitsongo: tsy misy soritr’aretina amin’ny antsipirihan’ny sehatry ny fahaiza-manao, miaraka amin’ny antsipiriany mampitolagaga, ny fahafatesana dia eny amin’ny rivotra foana, miaraka amin’ny ady saina lehibe miaraka amin’ny tsy misy toerana ho an’ny adala hanamora ny lalao saina. Ny famenoana io teti-dratsy io dia ny fahafahana hiaina ao an-tsain’ny mpanao heloka bevava sy ny rariny, satria ny andaniny sy ny ankilany dia miady mafy ao amin’ny fonjan’ny fanaintainana mba hitady, maika sy tsy tapaka. , fampitoniana ny fanahy.
Negro kely folo
Olona folo no nahatsikaritra fa voasoloky mba “handoa vola” amin’ny “heloka bevava” nataony, nifanitsy tamin’ny sarivongana kely miisa 10 napetraka teo ambony latabatra tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny. Tamin’ny andro manaraka, tsirairay avy, ny olona dia maty tamin’ny fomba mitovy amin’ny rima ao amin’ny efitrano tsirairay voalaza. Ny tena mahagaga dia rehefa maty ny olona iray dia mihena iray ny isan’ny sarivongana ao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny.
Ny olona voalohany maty dia Anthony Marston, matin’ny fanapoizinana misy soritr’aretina mitovy amin’ny olona kenda. Taorian’i Marston dia i Ethel Rogers, ilay mpikarakara trano maty izay hitan’ny vadiny maty noho ny fisotroana fanafody fatoriana tafahoatra. Ny jeneraly Macarthur dia toa nanana fahatsiarovan-tena ho faty, ka tsy nihinana intsony izy ary nipetraka nijery ny ranomasina ary nibanjina ny tenany, dia hitan’ny dokotera Armstrong taty aoriana fa maty tamin’ny zavatra mafy nandona ny lamosin’ny lohany.
READ Những Cuốn Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay Nhất Của Cố Mạn | Anybook.vn
Ny olona fahefatra maty dia i Thomas Rogers, raha teo am-pikapa hazo hanomanana ny sakafo maraina i Thomas dia toa nipitika ny tanany ary nandefa ilay tantanana nanidina mivantana teo amin’ny lohany. Amin’ny maha olona nino foana fa tsy nanao na inona na inona mifanohitra amin’ny Finoana izy, fa ny hafa dia maty noho ny famaizan’Andriamanitra, fa i Emily Brent koa dia tsy tafavoaka velona, ​​​​dia voapoizina teo amin’ny tendany izy taorian’ny sakafo antoandro, ny ratra voatsindrona. fanindronan-tantely.
Ny harivan’iny dia anjaran’ny Mpitsara Wargrave no nahitan’ny Dr. Armstrong maty voatifitra teo amin’ny lohany teo am-panaovana saron’ny mpitsara. Ilay dokotera mihitsy ny ampitson’iny ihany koa no hitan’ny ambiny maty an-drano teo amin’ny hantsana. Blore no olona fahavalo maty tao amin’ilay nosy, ilay mpitsongo tsy miankina voadaroka tamin’ny sarivongana tao amin’ny efitranon’i Miss Vera Claythorne raha teo amoron-dranomasina niaraka tamin’ny vatan’i Dr. Armstrong ny roa hafa.
Nikoropaka i Claythorne, ka nangalatra ny basy Lombard ary namono ilay mpikarama an’ady taloha. Tamin’ny farany dia niverina tao amin’ny efitranony izy ary nananton-tena tamin’ny seza sy tady natsangan’olona…
Raharaha tsy misy na tsy misy ny nahavanon-doza ity.
Vorona mena vozona
Voasaron’ny polisy Norveziana nandritra ny fitsidihan’ny filoha amerikana i Harry Hole dia nafindra tany amin’ny Departemantan’ny Fiarovana mba hanara-maso ny hetsika neo-Nazi any Norvezy. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy manao fanadihadiana momba ny fahafatesan’ny mpanohana fasista iray izy. Ary izany dia vao fiandohan’ny fanadiovana izay nataon’ilay mpamono olona mba hamerenana amin’ny laoniny izay noheveriny ho rariny. Ilay nahavanon-doza dia miantso ny tenany ho robin. Nandray fepetra izy mba hamaly faty an’ireo noheveriny fa namadika azy fa tsy azon’ny lalàna manasazy. Mino koa izy fa Andriamanitra irery ihany no manan-jo hitsara azy.
Niampy ny fahafatesana nanaraka izany. Toa olon-tsy fantatra ireo niharam-boina fa raha ny marina dia tafiditra ao anatin’ny tantara saro-takarina izay nanomboka tamin’ny Ady Lehibe Faharoa.
Sarotra be ny mampisafotofoto izay mpamaky tsy mifantoka, misarika ny saina hanerena ny fifantohan’ny tena amin’ny fahasarotana be, mahagaga ny manome fahafaham-po ny mpamaky rehefa tonga amin’ny farany, ary ampy ny antsipirian’ny tetika ho an’ny filaharan’ny tohiny, tena kintana vaovao amin’ny karazana mpitsikilo ny robin. .
Zazavavy manana tatoazy dragona
Boky tena manan-tsaina momba ny mistery mahafaty, tantaram-pianakaviana, tantaram-pitiavana, ary ny asa ambanin’ny tany amin’ny tontolo ara-bola, izay samy nifamatotra tamin’ny fomba miavaka.
Henrik Vanger, lohan’ny fianakaviana Vanger malaza, dia 80 taona eo ho eo nefa mbola tapa-kevitra ny hitady ny marina ao ambadiky ny fanjavonan’i Harriet, zanak’anabaviny.
Mikael Blomkvist, mpiady an-gazety izay simba ny lazany noho ny fanendrikendrehana, dia nokaramaina mba handalina ny tantaran’i Harriet.
Lisbeth Salander, tovovavy 24 taona nanao tombokavatsa, mpijirika mahay dia manana ny fahendren’ny olona iray indroa ny taonany.
READ Dứt Tình – Tiểu thuyết đầu tay của Vũ Trọng Phụng | Anybook.vn
Ilay duo hafahafa, Blomkvist sy Salander, dia nahita tadin’ny faharatsiana toa miafina mandrakizay ao amin’ny fianakavian’i Vanger, ireo tetika maloto amin’ny kolikoly eo an-tampon’ny indostrian’ny Soedoà mifamatotra avokoa.
Sipa very – Sipa tsy hita
Gone Girl – Ilay tovovavy tsy hita dia mihodina manodidina ny toetran’i Amy Elliott Dunne – mpanoratra malaza sy manan-tsaina izay vadin’i Nick Dunne. Tamin’ny faha-5 taonany mariaziny dia nanjavona tampoka izy.
Tsy ampy hamaranan’ny polisy ny porofo miparitaka teny an-toerana. Nisy ny fanadihadiana natao haingana ary nahasarika ny sain’ny besinimaro. Ny ahiahy rehetra dia ao amin’ny vadiny Nick Dunne ary ny ankamaroany dia mino fa namono ny vadiny izy. Na dia mitazona hatrany ny tsy fananan-tsiny aza izy, ny fijoroana vavolombelona nataon’i Nick dia manana banga toy ny manafina tsiambaratelo.
Ny famantarana miparitaka eny an-toerana, ny fanadihadiana avy amin’ny polisy, ny antsipirian’ny banga dia nambolena tamim-pahakingana manerana ny tantara. Amin’izay dia esorina tsikelikely ny voalin’ny tsiambaratelo, ary samy mahita ny valinteniny avy ny mpijery.
Indray andro ririnina tamin’ny 1959, dia nisy olona efatra tao amin’ny fianakaviana Kansas nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana. Iray volana mahery taty aoriana, nosamborin’ny polisy ny roa voarohirohy, Hickock sy Perry Smith, tany Las Vegas. Taorian’ny fakana am-bavany fohy ihany dia niaiky ny heloka vitany ireto roalahy voarohirohy ireto.
Nanaitra an’i Etazonia manontolo ilay vono olona tamin’io taona io, ary niandrandra ny vaovao farany momba ilay raharaha ny olona. Ny fahalianana ihany koa no nanosika an’i Truman Capote handeha teny an-toerana sy hanadihady ny zava-nitranga.
Ity boky ity dia teraka noho izany antony izany.
I Rachel no mandeha lamasinina isan’andro. Isan’andro toy izany, nijanona teo amin’ny gara kely ny lamasinina, avy teo am-baravarankely dia nahita mpivady nisakafo maraina teo an-davarangana izy. Tsapany tsikelikely fa zatra azy ireo.
Ary indray andro dia nahita zavatra nahatsiravina izy. Naharitra iray minitra monja dia niainga indray ny lamasinina, saingy ampy izay. Tsy afaka nangina i Rachel, tsy maintsy nilaza tamin’ny polisy ny zavatra hitany izy ka tratra tao anatin’ny tadio-javatra. Nanao asa tsara ve izy sa nanakorontana kokoa?
Tamin’ny 1980, vehivavy manambady iray miaraka amin’ny zanany lahy amin’ny Toyota Corolla nihazakazaka nankany amin’ny trano manokana iray ao amin’ny firenena. Nasainy niandry tao anaty fiara ny zanany lahy, ary avy eo nody tany amin’ilay olon-tiany. Rehefa nifankatia izy sy ny olon-tiany dia toa nisy olona nitsirika teo am-baravarankely. Nijery teo ivelany izy ireo ary tsy nahita afa-tsy lehilahy lanezy lehibe iray.
Ny andro nahatongavany koa dia ny andro nanombohan’ny orampanala.
Efatra amby roapolo taona taty aoriana, ny Inspektera Harry Hole dia tsy maintsy manara-maso mpamono olona maromaro miaraka amin’ny hafetsena tsy mbola hitany hatrizay. Ny fahaizany misaina maranitra, ny di-doha ary ny fahaizany nianarany tamin’ny taranja FBI dia nanosika an’i Harry hahita ny fifandraisan’ireo tranga ireo, mahatsapa zavatra roa iraisan’izy ireo izy: vehivavy daholo ireo niharam-boina. .
Previous: Tiểu sử và sự nghiệp của Mark Manson – ECCthai | Anybook.vn
Next: Môi trường làm việc là gì? Thế nào là một môi trường làm việc tốt ? | Anybook.vn